Huku yeSalimbocca idya yechinyakare yekuItaly inoshandurwa uchishandisa huku panzvimbo yevhuru. Izwi rekuti saltimbocca rinoreva "kusvetukira mumuromo", uye chokwadi ndechekuti ndizvo chaizvo! Iyi yekubheka ndeyechokwadi kune yechinyakare ... Read More
Shrimp Scampi chihwitsi chakakurumbira muAmerican icho chakavakirwa patsika yeItaly yekubika Scampi, ayo ari madiki crustaceans anotaridzika zvishoma kunge madiki mashanga. MuItari, tsika yanga iri yeku… Read More
Kana paine dhishi rimwe Tracy uye ini ndisingakwanise kurarama ndisina, zvisinei nekuti tiri kupi, chiFrench Onion Soup. Ndiro ndiro imwe iyo, paunoda, hapana chinotsiva. Iyo ingangoita French Onion… Read More
German Chocolate Cake Chikafu chikafu, chikafu, uye chinonaka chikafu chakanga chisina chiGerman. Iine midzi yawo pakati pe 19th century muAmerica apo mubiki Samuel German akagadzira chokoti chine rima, iyo inokanya iyo ... Read More